မီးသတ်ကား ဆိုပြီး လူတိုက်တိုက် ကားတိုက်တိုက်လုပ်တာတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မီးသတ်ကား ဆိုပြီး လူတိုက်တိုက် ကားတိုက်တိုက်လုပ်တာတွေ
မီးသတ်ကား ဆိုပြီး လူတိုက်တိုက် ကားတိုက်တိုက်လုပ်တာတွေ
Posted by gwa toe on Nov 6, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
အောက်တိုဘာ လကုန် နေ့က သံတွဲမြို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မှ မီးသတ် ကားအသစ်စက်စက် ကြီး ယဉ်တိုက်မူ ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ် ကားရှေ့ ခမ်းတခုလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်
ကားကတော့ ပြည်သူလူထု စုပေါင်းလှူဒါန်းထားတဲ့ကားပါ။ ဖြစ်ပုံက ဆေးရုံနောက်ဖက် ကအမှုိုက်ပုံ ကို စီပင်သာယာကမီးရှို့ တာကနေ မီးခိုးလုံးကြီးတွေထွက်လာတော့
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်မြို့မှာ မီးသတ်ဌာန တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးကို တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်စီရင် လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်လို့ အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ လောက် ဆန္ဒပြကြ ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားပုံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက မီးလောင်လို့ မီးသတ်ဌာနက သွားရောက် မီးငြိမ်းရာကနေ လမ်းမှာ…
အဖွဲ့ အစည်းတွေကလဲ စည်းကမ်းတင်းကြပ်ဘို့လိုနေပါပြီ လို့တင်ပြလိုက်၇ပါတယ်
ပုံကိုသေချာ view image လုပ်တော့ ၊ မီးသတ်ကားက အသစ်တော့ မဟုတ်ဘူး
ဘာဒွေဒုံး ဟိုနားလဲစာကတို့လို့တန်းလန်း ဒီနားလဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ သတင်းပြည့်စုံတဲ့ လင့်ခ် ကိုညွှန်းတာလား ပိုစ့် ကိုယ်တိုင်ရေးတာလား
နောက်ဆုံးပေါ် SMS နည်းနဲ့ ပို့စ်တင်ထားတာရားး????
သစ်ထူး လွင် မှာ တွေ့ ကတည်း က အူယားနေတာ။ အားရ ပါး ရ မန့် မဟဲ့ ဆိုပြီး ၀င်လာ လိုက်တာပိုစ့် က ဟိုမရောက်၊ ဒီ မရောက် အတိုကောက် ဖြစ်နေတယ်။
ထူး ပါဘူး မန့် လက် စနဲ့ ဆက် မန့် လိုက် အုံး မယ်။
ဥပဒေ မှာ ကျောသား ၊ ရင်သား မခွဲ ခြား သင့် သလို၊ မီးသတ်ကား မို့ လို့ ဆိုပြီး မခွဲ ခြား သင့် ပါဘူး။ ခုလည်း။သေဆုံး ဒဏ်ရာ ရ သူ တွေ အတွက် တရား မျှ တမှု ကို ပြန် ယူ ပေး တာ ၊ ဥ ပဒေ ကြောင်း အရ ဆောင် ရွက်တာ မမှား ပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကားမောင်း သူ က အရက် သောက် ထား တယ် လို့ လည်း သိ ရ ပါတယ်။ ကား မကောင်း တာလည်း ပါတာပေါ့ လေ၊ ဒါပေမယ့် ဟို ဘက် ကလည်း လူ့ အသက် တစ်ချောင်း ကိုး ။
တဆက်တည်း ပြော ရရင် အားလုံး ဥ ပဒေ နဲ့ တပြေး ညီ ဖြစ်သင့် ပါတယ်။ မီး ပေါ့ ဆ တဲ့ သူ ဆိုရင် လည်း ဘယ်သူ ကို မဆို အရေးယူ ရမှာ ဖြစ်သလို၊ စည်း ကမ်း မဲ့ ဆိုင်ကယ် စီးတဲ့ သူ တွေ ကိုလည်း၊ အချိန်အခါ မရွေး အရေးယူ ရ မယ်။
တို့ နိုင်ငံ မလဲ ဒီ မို ကရေ စီ လေး မှ အပြည့် အ၀ ရ မယ် မကြံ သေး ဘူး ၊ ထစ် ကနဲ ရှိ ဆန္ဒ ပြ မယ် ဆို တာ ချည်း ပဲ။
ဆက်ဖတ်ပါ၇န် မီးသတ် ကားအသစ် တခါမှမီးမသတ်ဘူးသေးသောကားပါ အဲဒီအချိန်မှာ မီးသတ်ကားကားဟောင်းကြီးနဲ့မီးသတ်လို့ မီးမရှိတောပါ ကားသစ်ကြီးကိုဟန်ပြ မောင်းထွက်လာတာ မောင်လာတဲ့ဒရိုင်ဘာကတော့ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူးပါ ထွက်လာတာနဲ့ တဖါလုံလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာတင် နောက်ဘီးကွဲ ပြီး ကြောက်ကြေက်နဲ့ဆွဲချလိုက်တာ ဘေးကကားကို ၀င်တိုက် ကာရှေ့ခမ်းတခုလျုံက်စီးကုန်ပါတယ် ကားက သံတွဲမြို့ကစုပေါင်းဝယ်ယူထားထဲ့ မီးသတ်ယာဉ် အသစ်စက်စက် တိုယိုတာ ကားကားပါ ပြောချင်တာက တခါတုန်ကလဲ ဒီးကားမျိုးကိုမြိုက လှူပြီးသွားပါပြီ ဒီကားတွေကို မီသတ်က သူတို့မယားတွေမိသားစု ဈေးဝယ် ဆေးခမ်းသွား ကားအဖြစ်ေ၇တိုင်ကီကိုပါ ဖြတ်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေကိုပါကားသစ်ကလှူထားတာတလလောက်ဘဲ ၇ှိသေးတာပါ ပုံကိုတော့ မတင်နိုင်တော့ပါဘူး ပို့တင်ရင်းက နေ လိုင်းကဘာဖြစ်သွားတယ်မသိပါ ရေးထားတဲ့ စာတွေပျောက်ကုန်လို့ ပြန်ရေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် တင်ပြချင်တာကအများပြည်သူ လှူထားသော မီးသတ်ကား မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ပိုင်မိသားစုသုံးယာဉ် အဖြစ်သုံးစွဲတာကို တင်ပြချင်တာပါ ပြီးတော့ မီးသတ်ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာ ကမမောင်းတတ် မောင်းတတ် မီးသတ်ကားတက်မောင်းတာမျိုးတွေနောက်နောင် မဖြစ်ပွါးစေရန် အတွက် ၇ည်စူးပြီးတင်ပြအပ်ပါသည်
ဟုတ်ပါတယ် မီးသတ်ကားဆိုပြီး ဘယ်လောက်ဘဲ အရေးတကြီးဖြစ်နေပါစေ တိုက်မိပြီဆိုရင် သေကြေပျက်စီးမှာဘဲမို့ ဥပဒေအရအထိရောက်ဆုံးအရေးယူသင့်ပါတယ်….
ကဲ gwa toe ရေ မင်းသိအောင်တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ကွာ ကားအနီမြင်တိုင်း မီးသတ်ကားမဟုတ်ဘူးကွ ရေတိုင်ကီပါတဲ့ကားမှ မီးသတ်ကားလို့ခေါ်တယ်။ ရေတိုင်ကီမပါတဲ့ကားကို အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်လို့ခေါ်တယ် နားလည်လား။ နောက်တစ်ခုက မီးလောင်ပြင်ထွက်ပြီဟေ့ဆိုရင် မီးသတ်ကားနဲ့ အပြိုင်လိုက်မောင်းနေကြတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေစည်းကမ်းမရှိတာကော မင်းသိရဲ့လား။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ မှမရှိရင် သန္ဓေ(၄)(၅)ယောက်နဲ့ မီးလောင်မှုကို ဘယ်လိုလုပ်ငြှိမ်းနိုင်မှာလဲ။ မင်းတို့အိမ် မီးလောင်ရင်ကော မလာရဘူးလား။ (“ကားက သံတွဲမြို့ကစုပေါင်းဝယ်ယူထားထဲ့ မီးသတ်ယာဉ် အသစ်စက်စက် တိုယိုတာ ကားကားပါ ပြောချင်တာက တခါတုန်ကလဲ ဒီးကားမျိုးကိုမြိုက လှူပြီးသွားပါပြီ ဒီကားတွေကိုမီသတ်ကသူတို့မယားတွေမိသားစု ဈေးဝယ် ဆေးခမ်းသွား ကားအဖြစ်ေ၇တိုင်ကီကိုပါ ဖြတ်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေကိုပါကားသစ်ကလှူထားတာတလလောက်ဘဲ ၇ှိသေးတာပါ ပုံကိုတော့ မတင်နိုင်တော့ပါဘူး ပို့တင်ရင်းက နေ လိုင်းကဘာဖြစ်သွားတယ်မသိပါ`) လို့မင်းပြောတာက တမင်သက်သက်ဂုဏ်သိက္ခာချသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလိုပြောနိုင်ရအောင် မင်းဘယ်လောက်သိလို့လဲ။ တကယ့်အဖြစ်မှန်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံအထောက်အထားနဲ့ တင်ပြလိုက်ပါ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက အဲဒီမြို့နယ်တာဝန်ခံကို အရေးမယူဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်မနေပါဘူး။ စေတနာနဲ့ အကြံတစ်ခုပေးလိုက်မယ် သတင်းအမှားကို မစဉ်းစားဘဲတင်မဲ့အစား၊ သတင်းအမှန်ကို အရင်းခံပြီး တင်ပြစေချင်ပါတယ်။
ကိုဇော်ဂျီေ၇ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သံတွဲမြို့ကို လှမ်းပြီးစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါ ၀၄၃၆၅၃၅၁ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့င်္သတွဲမြို့၀၄၃၆၅၂၄၆ သံတွဲရဲစခမ်း ကို ဖုန်းနဲံ့မေးကြည့် ပါ ကားကအခု မဟာဗောဓိလမ်းက ၀ပ်ရှော့ ရှေ့မှာ ၇ပ်ထားတယ် လာကြည့်ပြီးမှဘဲ သတင်းမှန်မမှန် ပြောပါ ကားရှေ့မှန် တောင် ပြန်မတတ်ရသေးဘူး